Lamadegaan la mood - Wikipedia
Lamadegaan la mood
lamadegaan la mood kuleyl ah
lamadegaan la mood qaboow ah
Lamadegaan la mood (Af Ingiriis : semi-arid climate ama steppe climate; ) waa nooc ka mid ah cimilada deegaanada hella roob aad u yar sanadkii, kuwaasi oo ka baxaan noocyo kooban oo dhir ah.
Deegaano lamadegaan la mood ah oo ku yaala wadanka Baraasiil
2 Lamadegaan la moodka kulul
3 Lamadegaan la moodka qaboow
Deegaano ay buuxisay caro bataax kali ah
Lamadegaan (Af Ingiriis : desert; ) (sidoo kale loo yaqaano Saxare) waa deegaan aan lahayn biyo iyo dhir; isla markaana leh heerkul aad u kulul wakhtiga maalintii iyo qaboow daran habeenkii. Lamadegaanku waa meelo aad ugu yar yahay roobku taasi oo keentay biyo la'aan daran iyo abaaro joogto ah. In kastoo ay ku kala duwan yihiin bixitaanka dhirtu aad ayay ugu yar tahay ama kamaba jirto ayaa la odhan karaa deegaanada saxaraha ah; sababta ugu weeynina waa biyo la'aanta ka jirta lamadegaanka. Af Soomaali ahaan ereyga "lamadegaan" (Lama-Degaan) wuxuu ka turjumayaa deegaano aan la degi karin ama nolosha dadka iyo xoolaha taageeri karin. Ereyga "Saxare" waxaa laga soo xigtay luuqada Carabiga, waana la micno ereyga Lamadegaan. In ku dhow hal meel sadex meelood (1/3) oo ah oogada dhulka ayaa ah lamadegaan ama saxare-lamood (badh-lamadegaan; "semi desert"). Dhulkaasi waxaa ka mid ah xataa cidhifyada aduunka (Cidhifka Waqooyi iyo Cidhifka Koonfur) halkaasi oo leh roob aad u yar, mararka qaarna looguba yeedho "Lamadegaanka Qaboow". Saxaraha waxaa lagu kala soocaa ayadoo la fiirinayo xadiga roob ee meeshaas ka da'a, heerkulka ay gaadho, waxyaabaha sababey saxaranimada deegaankaasi iyo meesha uu dhaco dhulkaasi juquraafi ahaan. Carada saxaraha inta ugu badan waa mid bataax ah oo ka kooban budo iyo boodh, sababtoo ah marka heerkul aad u sareeya oo kuleyl badan iyo hawo awood badani isku hesho carada ayaa waxay keentaa in burubur toos ah ku dhaco dhismaha caradaasi, taasi oo inta badan ka dhigta mid bataax iyo boodh ka samaysan.
Lamadegaanka qaboow ee Antaraktika.
Guud ahaan inkastoo ay kooban tahay nolosha ka jirta deegaanada lamadegaanka ah waxay u baahan tahay la qabsiimo khaas ah si eey ugu sii noolaadaan nolosha adag ee saxaraha. Tusaale ahaan, dhirta ka baxda lamadegaanku waa mid caleemo yaryar (mararka qaar aan lahayn wax caleen ah) si u yaraato biyo-baxa geedahaasi. Sidoo kale xayawaanada ku dhaqan saxaraha, sida geela oo kale, waa kuwo leh dhogor badan oo ka difaacda kuleylka iyo qaboowga daran, xubno gaar ah oo u keeydiya biyaha, lugo balaadhan oo u suurtogeliya dhex socodka bataaxa saxaraha, awood adkeysi badan oo gaajada iyo haraadka ah. Dadka iyo duunyada ku dhaqan lamadegaanku waxay in mudo ah ku jireen nolol adag. Maadaama biyaha iyo dhirtu ku yartahay ayaa waxaa khasab noqotey ineey bulshooyinka ku dhaqan saxaruhu noqdaan kuwo reer guuraa ah si ay u helaan daaqsiimo iyo waraab ay noolaadaan iyaga iyo xoolohoodu.
Lamadegaan la moodka kulul
Deegaanada cimilada kulul
Lamadegaan la mood cimilo kulul leh (juquraafi ahaan loo yaqaano: "BSh") waxaa laga helaa deegaanada waxyar ka baxsan dhulbadheha. Cimilada deegaanadan waxaa lagu yaqaana kuleyl saa'id ah, mararka qaar xadka dhaafa, gaar ahaan wakhtiga gu'ga iyo jawi diiran wakhtiga jiilaalka.
Lamadegaan la moodka qaboow
Deegaanada lamadegaan la moodka qaboow ee dunida.
Lamadegaan la mood cimilo qaboow leh (juquraafi ahaan loo yaqaano: "BSk") waxaa laga helaa deegaanada cimilada qaboow leh. Cimilada noocan ah waxaa lagu yaqaanaa badhtamaha qaaradaha ka fog biyaha.
↑ . Farlex http://www.thefreedictionary.com/desert. Soo qaatay 2013-05-12. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ "Cidhifka Waqooyi iyo Cidhifka Koonfur"
↑ "Bureau of Meteorology - CDlimate classification maps". Waxaa laga kaydiyay the original 2020-12-12. Soo qaatay 2016-09-05. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamadegaan_la_mood&oldid=217719"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Sebteembar 2021, marka ee eheed 11:37.